Makumi emunamato ekuununurwa kubva pakutukwa kukuru MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Minamato yenamato yekununurwa kubva pakutukwa kukuru
Kutukwa kwakazara masimba akaipa kubva mudzinza redu remadzitateguru ari kurwisa zvatakatarirwa. Vazhinji vanhu batwa rekutukwa kweruzhinji. Iyi ndiyo yakaipa nzira inozvidzokorora pachizvarwa chose. Dzimwe mhuri dzinorwara nekukasira kufa, nyaya dzekubereka michero, wanonoka kuroora, hurombo, vasina chibereko, kurambana nezvimwe izvi zvese zvinowanikwa mumatambudziko ekubereka. Asi nhau dzakanaka ndedzekuti, isu takanyora makumi maviri eminamato yekununurwa kubva pakutukwa kukuru. Iyi minamato yeminamato ichakutungamira apo iwe uchinamata nzira yako kubva mumisungo yekubatana kwemadzitateguru.
Iyi minamato ichakubatsira kuti uzvibvise pachako kubva kune yega yega nzira inowira mumhuri yako. Sezvo iwe uchinamata mirimo yekununura minamato, iwe unofanirwa kuzvisiya kubva kuzvitadzo zvemadzibaba ako uye unosunungurwa nekusingaperi muzita raJesu. Namata uyu minamato nekutenda uye ugamuchire zvipupuriro zvako.
1. Baba, ndinokutendai nekugadzira gadziriro yangu yokununurwa kubva kumhando dzose dzeuranda.
2. Baba, nengoni dzenyu, bvisai zvivi zvangu zvese nezvivi zvemadzitateguru angu, izvo zvakakonzera kusungwa uku muzita raJesu.
4. Ini ndinozvisunungura kubva kune chero nhaka yakagarwa nhaka, muzita raJesu.
5. O Ishe, tuma demo rako remoto kune hwaro hwehupenyu hwangu uye paradza huipi hwese hwakashata muhupenyu hwangu muzita raJesu.
6. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu zvese zvakagarwa nhaka satanic, muzita raJesu.
8. Rega ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene zvichenese chero nhengo mumuviri wangu, muzita raJesu.
9. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzakagarwa nhaka, muzita raJesu.
10. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kune yega nhaka yakaipa kutukwa, muzita raJesu.
11. Ini ndinosuka zvakaipa zvese zvandakadyiswa nazvo semwana, muzita raJesu.
12.Ndinoraira vese vakasimba vanovamba pahupenyu hwangu kuti vafe mitezo, muzita raJesu.
13.Ngati chero tsvimbo yevakaipa inosimuka kurwisa mutsara wemhuri yangu ishandiswe simba nekuda kwangu, muzita raJesu.
14.Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa remunharaunda rakanamatira munhu wangu, mune
15. Ndinoraira zvese zvinoparadza barika kuti varegedze kubatabata kwavo muhupenyu hwangu muna Jesu nwme
16. Iwe wakashata nheyo dzakasaririra, buda muhupenyu hwangu nemidzi yako yose, muzita raJesu.
17. Ini ndinotyora ndobva ndazvisunungura kubva kumhando dzose dzekunyengedzwa nemweya yakaipa, nezita raJesu.
18. Ndinozvisunungura kubva pane yakaipa kutonga uye kutonga, muzita raJesu.
19. Rega ropa raJesu riwedzerwe mumudziyo wangu weropa.
20. Harese suwo rakavhurirwa muvengi nenheyo dzangu ngavharwe nekusingaperi neropa raJesu.
Previous nyayaKununurwa kunamato manzwi kune vanopinda muwanano
inotevera20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nekutadza uye kuora mwoyo
Pfungwa dzeMunamato Yekukunda kweMweya
90 Hondo Yakapesana naHamani Minamato Yekunamata 2020
Chirevo Cheminamato YeMai Vese Pamusoro Pemba Yake
Great Kununurwa minamato